Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1112 lar
Lesona 11 : Ny fiainana Kristianina
08 - 14 Des. 2012
Ny fanambadiana Kristianina
Alarobia 12 Des.
Voary velona eo anivon’ny fiaraha-monina ny olombelona. Ao an-trano sy any amin’ny toeram-piasana, amin’ny toerana andalovana sy ifamezivezen’ny maro, ny olona dia voafaoka ao anatin’ny karazana serasera rehetra. Tokony hiavaka mazava ao anatin’ireo lafiny rehetra ireo ny fitondran-tenan’ny Kristianina mandray andraikitra, ary ny Baiboly rahateo manana fitsipi-piainana izay hitarika ho amin’izany fifaneraserana izany.
Fakafakao ireto andinin-tSoratra Masina manaraka ireto mba hahatongavana amin’ny famaritana ara-Baiboly ny atao hoe ny fanambadiana: Gen. 2:21-25; Mal. 2:14; Efes. 5:28.
Ny hoe mamaritra zavatra anankiray dia milazalaza ny dikany. Re hatrany ankehitriny fa saro-paritana ny fanambadiana satria manana dikany samihafa ny fanambadiana arakaraka ny olona sy ny vanim-potoana ary kolontsaina. Ny Baiboly kosa anefa tsy manana hevitra miroaroa toy izany momba ny fanambadiana. Araka ny Baiboly, ny fanambadiana dia fikambanana anankiray izay napetrak’Andriamanitra, ka ahitana olon-dehibe roa, lahy sy vavy izay hifampizara fifandraisana manokana sady maharitra. Ny fanambadiana ara-Baiboly dia voamariky ny fankasitrahana ny fitovian’ny lahy sy ny vavy, dia fifamatorana lalina ho amin’ny tena firaisana ka ahitana tanjona iraisana, sy faharetana, ary fahatokiana sy fifampitokiana. Tahaka ny fifandraisana amin’Andiamanitra, dia tokony ho voatahiry ho masina ny fifandraisana eo amin’ny mpivady lahy sy vavy.
Mazava loatra, sady fantatsika rehetra tsara, fa lasa hamaivanina matetika ny fanambadiana, eny, na dia eo anivon’ny fiangonana aza. Miditra ao anaty fanambadiana izay heveriny ho naorin’Andriamanitra ny olona; avy eo, rehefa miharatsy ny fandehan-javatra, dia mora aminy ny mitsangana manoloana mpitsara izay olombelona ihany, ka hampisaraka izay efa nakamban’ Andriamanitra amin’ny alalan’ny lalàna sy ny fitsipika noforonin’ny olombelona. Fantatsika rehetra fa misy zavatra tsy mety mihitsy eo amin’io sehon-javatra io; kanefa, amin’ny maha-fiangonana antsika, dia miady fatratra isika mikatsaka izay tokony hatao manoloana toe-javatra tahaka ireny.
Miaraka amin’ny olana momba ny fanambadiana maro, ny fanaovana tokantrano maso, ny fisaraham-panambadiana, ny fanambadiana indray, ary fisian’ny fanambadian’ny samy lahy na samy vavy, inona no fihaikana eo amin’ny ara-nofon’ny olombelona hitanao miseho eo amin’ny fiaraha-monina ankehitriny?
Ny fijangajangana, ny firaisana ara-nofo ivelan’ny fanambadiana, ny filalaovana mamoa-fady (pornographie) izay miseho lany eo anivon’ny fiaraha-monina – ireny no zavatra ratsy indrindra izay mitranga eny rehetra eny. Na izany aza, Andriamanitra dia mijery hatrany ny tsy fahombiazan’ny olombelona amin’ny fangoraham-pony sy ny famindram-pony be fitiavana. Ireo fanao ireo anefa dia tsy fahombiazana izay azo resena tsara amin’ny alalan’ny fahasoavan’i Kristy. Koa noho izany, dia tsy maintsy misy ezaka sy tolom-piavotana lehibe atao mba hahatrarana ny fenitr’Andrimanitra – fa tsy miezaka manamarin-tena ka miala tsiny amin’ny ota amin’ny alalan’izao karazana fialan-tsiny sy fombafomba ara-kolontsaina maro izao.